WIFI Bluetooth စပီကာများဝှက်ထားသောသူလျှိုကင်မရာ - HD Night Vision ကြိုးမဲ့ ၁၇၀ ဒီဂရီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင် Real Time View (SPY170) | OMG Solutions
ဝေးလံခေါင်ဖျားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့် router များမှတဆင့်ကင်မရာကိုချိတ်ဆက်သောအခါ, သငျသညျအဝေးမှဘယ်နေရာကနေမဆိုသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ဆိုင်မှာစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး, က SD ကဒ်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မိသားစုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်, သင့်တဲ့အခန်း, ဂိုဒေါင်, ဆိုင်, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင်၏အထိန်းစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့စပီကာနှင့်အတူတစ် 1080P HD ကိုဝှက်ထားသောသူလျှိုကင်မရာဖြစ်၏ စပီကာနဲ့ကင်မရာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ရှုထောင့်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ 170 ဒီဂရီ wide-angle lens ကို။
ကင်မရာ 128 GB ကို SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ် (မပါ) တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တက်ထောက်ခံပါတယ်; ဒါကြောင့်လည်းရွေ့လျားမှုထောက်လှမ်းမှတ်တမ်းတင်, 24 နာရီအသံဖမ်းနှင့်အချိန်-ချုံးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအဘို့အသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ SD ကဒ်ထဲအပြည့်အဝအခါ, ကအလိုအလျှောက်ဟောင်းနွမ်းဗီဒီယိုများ overwrite မည်, သင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုပါကြောင်းဒါကြောင့်လည်း, မြို့ပတ်ရထားမှတ်တမ်းတင်ထောက်ခံပါတယ်; သင်သည်လည်းရှုမြင်ခြင်းနှင့် APP ကိုမှတဆင့် SD ကဒ်ကိုဗီဒီယိုရဲ့ contents ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုကိုအာရုံခံသောအခါ, ဖုန်း APP ကိုကို (ဖုန်းအကြောင်းကြားစာ function ကိုဖွင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်) မှတဆင့်သငျသညျကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အလိုအလျောက်ပုံ ယူ. APP ကိုအတွင်းဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ထဲမှာကယ်တင်မည်။ သင်တို့သည်လည်းအလိုအလျောက် SD ကဒ်ပေါ်သို့မှတျတမျးတငျထားပါလိမ့်မည်သည့်စံချိန်ဗီဒီယို, ရန်အဆိုကိုထောက်လှမ်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ မှန်ဘီလူး၏ဘေးထွက်ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်တမ်းတင်ဘို့ညဥ့်ရူပါရုံကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလုံးနှင့်အတူကြွလာ။
1 ။ သာ 2.4G ကွန်ယက်ကို support မ, 5, G ကွန်ရက်ကထောက်ခံခဲ့သည်။
2 ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ဘက်ထရီသယ်မသုံးစွဲဖို့ပါဝါအတွက် plug ပါ။
pixel: 500, Mega CMOS
Frame ကအရေအတွက်: 25fps
Angle ကိုကြည့်ရှုခြင်း: 170 ဒီဂရီ
compressed စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: H.264
device Connection ကို Range: 5m
Range လက်ခံခြင်း wifi: 15-30m
ပံ့ပိုးမှုဝိုင်ဖိုင် Mode ကို: 802.11b / g / n / 2.4GHz
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20-80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Operating အပူချိန်: 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ -60
စစ်ဆင်ရေးစို: 15-85% RH အ
Player ကို Software များ: media player / VLC Player ကို
ကွန်ပျူတာ Operating System ကို: Windows / Mac OS X မှာ
မိုဘိုင်းဖုန်း Operating System ကို: Android / iOS ကို
အနည်းဆုံး illumination: 1LUX
သံသရာမှတ်တမ်း: အပိုင်းနှုန်း 1-60 မိနစ်
မက်စ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်: 128GB (အဘယ်သူမျှမ SD ကဒ်ပါဝင်သည်)
3282 စုစုပေါင်း Views စာ7Views စာယနေ့တွင်